Ukuveliswa kwemveliso - iXuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Iqela leHlabathi leHlabathi lelona lizwe likhulu elenza imveliso yeplywood kunye nelithumela ngaphandle e-China, neyasekwa ngo-1993 kunye neenkampani ezintandathu. Ngoku sonwabele umgca wemveliso engama-73 yefilimu ejongene neplywood ngamaplanga amahle kunye neLVL. Kwaye i-12 inkampani edibeneyo yesitokhwe kwi-OSB, MDF kunye nebhodi ye-melamine.
I-ROC yamanye amazwe yinkampani yokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kwiQela leHlabathi leKhaya.
Imveliso yethu yazo zonke iintlobo zepaneli yeenkuni yi-1,000,000m3 ngonyaka ngamnye. Ukuxhotyiswa ngoomatshini abaninzi abaphambili, i-Italian IMEAS sanders, oomatshini baseJapan be-UROKO, i-Veneer Joint Tenderizers kunye noomatshini abakhulu abomileyo, inkampani izimisele ukuvelisa nokuthumela iimveliso ezisemgangathweni ophezulu kwifilimu ejongene neplywood, iplywood, iplywood kunye neemveliso ze-LVL.
Kwishishini lokuthumela ngaphandle, iimveliso zeenkuni ze-ROCPLEX ziqinisekisiwe yi-IS09001: 2000, IS014001: 2004, CE, FSC, BFU, JAS-ANZ kwaye ithengiswe kakuhle kumazwe angaphezu kwe-100 kwihlabathi liphela, njengeJamani, Australia, USA, I-Chile, i-Libya, i-UAE, i-Saudi Arabia, i-Korea, i-Japan, njalo njalo.
Kwimakethi yase-china yendawo, uphawu lwe-ROC lwasekhaya lwasekhaya oludumileyo kwisiza sokwakha i-china nakwimakethi yokuhombisa ekhaya.
Uphumelele iwonga "lophawu lwentengiso lwaseTshayina oludumileyo", "iiMveliso eziQinisekisiweyo zoMgangatho waseJiangsu" kunye "neAAA Corporate Credit".
Ngenjongo yokutya kwiimfuno zorhwebo lwehlabathi, siye sasebenzisana nabathengisi bezinto zokwakha abadumileyo kunye nesuphamakethi, sinoxanduva lokuyila kunye ne-OEM yepaneli yeenkuni kunye nefenitshala.
Ukuthumela ngaphandle kunye nokungenisa
Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini:
Imbuyekezo Zhanpeng Timber Co., Ltd.
Imbuyekezo Tongshun Wood Co., Ltd.
Imbuyekezo Senhao Wood Co., Ltd.
Senso izixhobo zokwakha co., Ltd.